Cawayska Washington, 01 April 2014
Talaado 1 April 2014
Caweyska:Fanaanka Salaad Derbi
Barnaamijka Caweyska Waxaad ku maqlidoontaan Qeybtii koobaad wareysi aan la yeelaney Fanaanka Salaad Maxamed Shardi (Salaad Derbi)
Barnaamijka Cawayska Washington waxaad ku maqli doontaan qodobo kale duwan oo xiiso badan. Barnaamijka wuxuu idaacadda VOA ka baxaa haben walba oo Sabti ah.
Cawayska: Fanaanka Cabdi Baadil (Q-2aad)
Barnaamijka Cawayska Washington waxaad ku maqli doontaan qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin, qeybtii 2aad ee wareysigii aan la yeelanay fanaan Soomaaliyeed Cabdi Baadil, iyo kuwo kale.
Cawayska Washington :
Barnaamijka Caways ka Washington waxaad ku maqli doontaan Qodobo aad u xiiso badan.
Barnaamijka Martida Microfoonka waxaa toddobaadkan marti noogu ah Xaashi Shaafi oo madax ka ah hay’ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo la yiraahdo Somali Action Alliance oo xarunteedu tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Barnaamijka Caweyska Washingotn ee toddobaadka waxaan idinku haynaa sheekooyin xiiso leh.
CAWEYSKA: CALI DHAANTO IYO FADUMO A. YASIN
Barnamijka Caweyska Washington ee toddobaadka waxaan idiinku haynaa sheekooyin xiiso leh iyo wareysiga labada fanaan ee Cali Dhaanto iyo Faadumo Axmed Yaasiin
Barnaamijka Cawayska Washington waxaad todobaadkan ku maqli doontaan qodobo ka mid yihiin qaybtii ugu dambaysay ee Waraysigii Abwaan Xasan Dhuxul ( Laabsaalax) iyo qiso cajiib ah oo ka dhacday dalka Kenya.
Cawayska: Abwaan Laabsalaax (Q-3aad)
Barnaamijka Caweyska ee toddobaadkana waxaan idinku haynaa sheekooyin xiiso leh, oo ay ku jirto sheekadii taxanaha ahayd ee Adeegto, iyadoo qaybta dambana aad ku maqli doontaan qaybtii saddexaad ee wareysiga hal abuure Xasan Abuukar “Laabsaalax”
Cawayska: Abwaan Laabsalaax (Q-2aad)
Barnaamijka Cawayska Washington waxaan idiin ku hayno qodobo xiiso badan iyo qeybtii labaad ee wareysiga aan la yeelanay Abwaan Xasan Dhuxul Laabsalaax.
Caweyska: Abwaan Xasan Dhuxul Laabsalaax
Barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaad waxaan idiinku haynaa qodobo kale duwan oo uu ka mid yahay wareysi aan la yeelanaya Abwaanka Xassan Dhuxul Laabsalaax oo sameeya heesaha.
Caweyska: Baacalwaan Qeybtii Ugu Dambeysay
Barnaamijkeena Caweyska waxaa ku dhageysan doontaan todobaadkan qeybtii ugu dambeysay ee wareysigii Fanaanka Cabdi Cali Baacalwaan, sheekadii adeegto iyo qodobo kale oo xiisa leh